သင်ဘယ်လောက်အထိ သန်မာကြံ့ခိုင်နိုင်သလဲဆိုတာကို သင့်ကိုယ်သင်သိသလား?
အမေရိကန် မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် Amherst ကောလိပ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစမ်းသပ်မှုမှာ စမ်းသပ်သူတွေဟာ သီးစဖရုံသီးလေးတစ်လုံးကို သံကြိုးတွေနဲ့ ရစ်ပတ်တုပ်နှောင်လိုက်ကြတယ်။ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာမယ့် ဖရုံသီးလေးဟာ သူ့ကိုတုပ်နှောင်ထားတဲ့ သံကြိုးရဲ့ဖိအားအပေါ် ဘယ်လောက် ရုန်းကန်နိုင်အားရှိမလဲ၊ ဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်ရှိမလဲလို့ လေ့လာအကဲခတ်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။
စစချင်းမှာ စမ်းသပ်သူတွေက သံကြိုးရဲ့ဖိအားအပေါ် ဖရုံသီးခံနိုင်မယ့်အားဟာ ၅ဝဝပေါင်ပဲရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။
စမ်းသပ်တဲ့ပထမလမှာ ဖရုံသီးရဲ့ခံနိုင်အားဟာ ၅ဝဝပေါင်ရှိခဲ့တယ်။ ဒုတိယလမှာ ခံနိုင်အားဟာ ၁၅ဝဝပေါင်ရှိခဲ့တယ်။ ဖရုံသီးရဲ့ခံနိုင်အား ပေါင်၂ဝဝဝအရောက်မှာ စမ်းသပ်သူတွေဟာ သံကြိုးကို အရင်ကထက် ပိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ် တုပ်နှောင်လိုက်ကြတယ်။ ဖရုံသီးရဲ့ရုန်းအားကြောင့် သံကြိုးပြေသွားမှာစိုးလို့ဖြစ်တယ်။
စမ်းသပ်မှုနောက်ဆုံးမှာ ဖရုံသီးရဲ့ခံနိုင်အားဟာ ပေါင်၅ဝဝဝကျော်အထိ ရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီး ပေါင်၅ဝဝဝကျော်မှ ဖရုံသီးကွဲအက်သွားခဲ့တယ်။
ကွဲသွားတဲ့ဖရုံသီးဟာ စားလို့မရအောင် မာကျောနေခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက သံကြိုးကိုထိုးဖောက်ချင်တဲ့ ဖရုံသီးရဲ့အသားတွေဟာ ကျစ်လစ်မာကျောသွားလို့ဖြစ်တယ်။ ဖရုံသီးဟာ သူ့ရှင်သန်ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားထားတဲ့ သံကြိုးကိုဖြိုပစ်နိုင်အောင် အာဟာရဓာတ်တွေကို ပိုစုပ်ယူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အမြစ်တွေဟာ အရပ်လေးမျက်နှာလုံး ပေရှစ်သောင်းကျော်အထိ ဖြန့်ကားသွားတာကို တွေ့ရတယ်။ပန်းခြံတစ်ခုလုံး သူ့အမြစ်နဲ့ ပြည့်နေခဲ့တော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်အထိ သန်မာကြံ့ခိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကို မခန့်မှန်းတတ်ခဲ့ဘူး။ကြီးမားတဲ့ပြင်ပရဲ့ဖိအားကို ဖရုံသီးခံနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် လူတွေကရော? တူညီတဲ့အခြေအနေမှာ ဘယ်လောက်ခံနိုင်အားရှိခဲ့မလဲ?
လူအများရဲ့ခံနိုင်အားဟာ ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ ဖိအားကို ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော့်ကို Eleanor Roosevelt ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း "မိန်းကလေးတွေဟာ လက်ဖက်ခြောက်ထုပ်နဲ့တူတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်ထိ သန်မာကြံ့ခိုင်နိုင်သလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ကြဘူး။ လက်ဖက်ခြောက်ထုပ်ကို ရေပူထဲထည့်စိမ်လိုက်မှ ခံနိုင်စွမ်းတွေ တဖြည်းဖြည်း ထွက်လာသလိုမျိုးပေါ့။ ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်း အဲဒီစွမ်းရည်ရှိကြတယ်"
တစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာကို သင်ရင်ဆိုင်နေရသလား?
အဲဒီအခက်အခဲ ပြဿနာဟာ ဖြေရှင်းလို့မလွယ်ကူလောက်အောင် ဖြစ်နေခဲ့လား?
သင့်ကိုရစ်ပတ်ထားတဲ့ အခက်အခဲသံကြိုးထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ သင်သန်မာကြံ့ခိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီအခက်အခဲကို သင်စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စိတ်ဓာတ်၊ အသိဉာဏ်၊ ခန္ဓာတွေရဲ့အင်အားကိုစုစည်းပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်အခက်အခဲ၊ ဘယ်ပြဿနာကများ သင့်ကိုဟန့်တားထားနိုင်ဦးမလဲ?
ရေးသားသူ-- Steve Goodier "Your Life Support System"
Posted by Coralchitthu at 10:44 AM